10 Calaamadood Oo Muujinaya In Lamaantaada/Lamaankaaga Ku Xushmeeyo | Aayaha
Aayaha editorNovember 30, 2018
Haddii xiriirka uu leeyahay xushmad waa mid qiimo leh, waana kuwaan calaamadaha lagu garto in lamaantaada/lamaankaaga ku xushmeeyo.
1. Daryeel dhab ah
Waxaa lagaaga baahanyahay in lamaantaada/lamaankaaga aad siiso daryeel dhab ah isla markaana aad qiimeyso, waxay taasi keeneysaa inay aad kuu qadariso ama uu aad kuu qadariyo lamaankaaga.
2. Wuxuu ka fekeraa dareenkaaga
Haddii lamaankaaga uu ka fekero dareenkaaga, waa inuu ku jecelyahay, waxaa sidoo kale jira in dareenkaaga uu qadariyo isla markaana uu micno weyn ugu fadhiyo.
3. Lamaankaaga wuu ku dhageystaa
Maqalka wuu ka duwanyahay dhageysiga, dhageysiga waa la socoshaha iyo inaad dareen siisid waxa lagu leeyahay, lamaan ku dhageysto iyadoo aanan loo eegin arrin gooni ah, waxaa hubaal ah inuu ku jecelyahay.
4. Waa kugu faraxsanyahay
Lamaan ku faraxsan inuu nolosha kugu helay si buuxda ayuu kuu xushmeynayaa isagoo wanaag kuu sameynaya. Lamaanka kugu faraxsan aad buu kuu qiimeynayaa isagoo aanan ku dhaawaceyn kuna xushmad dareyneyn.
5. Wuxuu daneeyaa farxaddaada
Lamaanka ku xushmeeya si dhab ah ayuu uga fekeraa faraxaddaada isagoo dhib walba u mara sidii uu kaaga farxi lahaa, xushmadda waxay abuurtaa qiimo, qiimahana wuxuu qofkaas ka dhigaa inuu ka fekero farxaddaada.
Lamaan xushmad badan wuxuu isku dayi doonaa inuu ku fahmo, inuu fahmo sidaad dareemeysid iyo fahamka waxaad leedahay; lamaan xushmad badan wuxuu muujiyaa calaamado muujinaya inuu yahay qof la fahmi karo.
Waxaad u baahantahay fekerka qof aad ku kalsoontahay. Dad badan oo isqaba feker iyo talo kama raadiyaan lamaantooda/lamaankooda, taasina waa xushmad darro.
8. Qiimeynta go’aankaaga
Lamaanka ku xushmeya uma baahanaayo fekerkaaga oo kaliya balse wuxuu qiimeynayaa fekerkaaga iyo go’aankaaga. Lamaanka/lamaanta noocaas ah waxay qiimeyn doontaa waxa walba oo dhahdo.
Daacadnimada waa calaamad xushmad. Lamaanka runta kuu sheega intuu been kuu sheegi lahaa waa nooca xushmadda saa’idka ah kuu haayo.
Lamaanka ku xushmeeya wuuku raali gelinayaa marka uu qaldamo ama qalad kaa galo isagoo isku dayi doona in dhaqankaas uu bedelo. Sidoo kale lamaanka/lamaanta noocaas ah niyadda kuma qaadeyso waxyaabaha noocaas ah ama cuqdad ahaan uma qaadeyso, horey ayay uga socotaa qaladka iyadoo qalbigeeda ka saarta.